महेश बस्नेत – Himalaya Television
प्रधानमन्त्री ओलीलाई च्यालेञ्ज नगर्न कांग्रेसलाई सांसद महेश बस्नेतले दिए यस्तो सुझाव
२६ चैत २०७७ काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेञ्ज गरेर बालहठ देखाउने काम नगर्न प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसका सांसदहरुलाई सुझाव दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता...
निलम्बित सांसद रेशम चौधरी भेट्न महेश बस्नेत किन पुगे जेल ? केके भए कुराकानी ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१३ चैत २०७७ काठमाडौं । ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष दूतका रुपमा सांसद महेश बस्नेतले भेट्नुभएको छ । बस्नेतले डिल्लीबजारस्थित कारागारमै पुगेर चौधरीलाई भेटनु भएको हो ।...
१८ फागुन २०७७ काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका सांसद महेश बस्नेतले आफूहरुको पक्षमा भोलिबाट ९२ जना सांसद पुग्ने दाबी गर्नु भएको छ । काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद बस्नेतले अबको प्रधानमन्त्री पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी...